မိ​မိ gmail account ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​ချင်​သ​လား . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မိ​မိ gmail account ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​ချင်​သ​လား .
​ဒါ​က ​ညီ​မ​ငယ်​တစ်​ယောက်​က ​မေး​ထား​လို့​ပါ . ​မေးလ်​နဲ့​ပို့​တာ​ဆို​တော့ ​မ​မှတ်​မိ​တော့​ဘူး . ​မေးလ်​ပို့​တဲ့​သူ​က ​များ​တဲ့​အ​ပြင် forward mail ​တွေ​က​လဲ ​တစ်​သီ​ကြီး . ​ဘာ​အ​ဓိ​ပ္နါယ်​မှ​လဲ ​မ​ရှိ​ဘူး . forward mail ​တွေ​ကို ​လိုက်​ပို့​နေ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​အ​ခု filter ​နဲ့ forward mail ​ပို့​တဲ့​သူ​တွေ ​ရဲ့ ​မေးလ်​ကို Block ​လုပ်​ထား​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ဒီ့​အ​တွက် ​သူ​တို့​တွေ​ရဲ့ ​မေးလ်​တွေ​ဟာ in box ​ထဲ​ကို ​ရောက်​လာ​မှာ ​မ​ဟုတ်​ဘဲ Trash ​ထဲ​ကို ​တစ်​ခါ​တည်း ​ရောက်​သွား​မှာ​ပါ . Trash ​ထဲ​မှာ ​ရောက်​သွား​ပြီး​တဲ့ ​မေးလ်​တွေ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော် ​မ​ဖတ်​ပါ​ဘူး . ​အ​ကုန်​လုံး​ကို Delete ​လုပ်​ပစ်​ပါ​တယ် . Forward mail ​ပို့​တဲ့​အ​ခါ ၃ ​ခါ​အ​ထိ ​ကျွန်​တော် ​လက်​ခံ​ပါ​တယ် . ​ဒီ့​ထက် ​ပို​လာ​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် .. ၃ ​ကြိမ်​အ​ထိ ​ပို့​တဲ့​သူ​ဟာ ​အ​ဓိ​ပ္နါယ်​မ​ရှိ​တဲ့ ​စာ​တွေ​ကို​ပဲ ​ဆက်​ပို့​နေ​တယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခါ​တည်း​ကို ​အ​ဆို​ပါ mail ​ပိုင်​ရှင်​ကို block ​လုပ်​ပစ်​လိုက်​ပါ​တယ် . ​တစ်​နေ့​ကို ​မေးလ်​ပေါင်း ​အ​စောင် 200 ​လောက်​ထဲ​က​နေ ​မ​သိ​လို့​မေး​လာ​တဲ့​မေးလ်​တွေ​ကို ​လိုက်​ရှာ​နေ​ရ​တာ​က ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော့်​ကို ​နား​လည်​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​ထင်​ပါ​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တော့ ​အ​ရေး​ကြီး​လို့ forward mail ​ပို့​တယ်​ဆို​ရင် ​ထား​လိုက်​ပါ​တော့ . ​ကဲ ​ကျွန်​တော် gmail account ​ကို ​မ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​ဖျက်​နည်း​ကို​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ် . ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​မ​သိ​သေး​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​ရည်​ရွယ်​တာ​ပါ . ​သိ​ပြီး​သား​လူ​များ ​နှာ​ခေါင်း​မ​ရှုံ့​ကြ​ပါ​နဲ့ . ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင်​က ​မ​စွမ်း​ဆောင်​နိုင်​ပဲ ​သူ​များ​လုပ်​တဲ့​အ​လုပ်​ကို ​သား​ပုတ်​လေ​လွင့်​ပြော​နေ​တာ​တွေ​က ​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး . ​ကို​တတ်​နိုင်​ရင် ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​က​လေး​လုပ် . ​တစ်​ချို့​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ် . ​သူ​များ​ကို​တော့ ​ဘာ​ဖြစ်​တယ် ​ညာ​ဖြစ်​တယ်​ဆို​ပြီး ​အ​ပြစ်​တွေ​ပြော​လို့ ​ကိုယ့်​အ​ပြစ်​ကို ​မ​မြင်​နိုင်​တဲ့​သူ​တွေ​ကို​လဲ ​တွေ့​ရ​ပါ​သေး​တယ် . ​တစ်​ပါး​သူ​ကို​ကျ​တော့ ​သံ brush ​နဲ့ ​တိုက်​ပြီး​တော့ ​ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​ကျ​တော့ ​မွှေး​ပွ brush ​နဲ့ ​မ​တိုက်​ပါ​နဲ့ . ​တစ်​ယောက်​ယောက်​ကို ​ပုတ်​ခတ်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် Direct ​ပြော​လိုက်​တာ ​ပို​ကောင်း​ပါ​တယ် . ​ကို​မ​လုပ်​နိုင်​တဲ့​အ​လုပ်​ကို ​တစ်​ပါး​သူ ​လုပ်​နေ​တာ​သိ​နေ​ရင် . ​ကို​မ​လုပ်​နိုင်​တဲ့​အ​လုပ်​ဖြစ်​တဲ့ ​အ​တွက် ​ဝေ​ဖန်​တာ ​မ​ကောင်း​ပါ​ဘူး . ​ကို​နိုင်​တယ်​ထင်​ရင် ​လုပ်​ပစ်​လိုက် ၊ ​ကျွန်​တော်​အ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ ​ဘယ်​ဘ​လောဂ်​ပိုင်​ရှင်​က ​ဘာ​ဖြစ်​တယ် ​ညာ​ဖြစ်​တယ် ​တစ်​ခါ​မှ ​မ​ရေး​ခဲ့​ဖူး​ဘူး . ​သူ​လဲ ​သူ​ဝါ​သ​နာ​ပါ​လို့ ​သူ​လုပ်​တယ် ၊ ​လုပ်​နိုင်​သ​လောက်​လုပ်​တယ် ၊ ​ကို​လဲ ​ကိုယ်​နိုင်​သ​လောက်​ပဲ ​လုပ်​မယ်၊ ​လုပ်​နိုင်​ရင် ​လုပ်​မယ်၊ ​မ​လုပ်​နိုင်​ရင် ​ပိတ်​ပစ်​လိုက်​မယ်၊ ​ဒါ​ပါ​ပဲ ​ဘယ်​သူ့​ကို​မှေ​တာ့ ​ကျွန်​တော် ​ပုတ်​ခတ်​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး၊ ​ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​ပြန်​မေး​လိုက် ၊ ​ငါ​က​ကော ​သူ​တတ်​စွမ်း​သ​လောက် ​လုပ်​ပေး​နေ​တဲ့ ​အ​တိုင်း​အ​တာ​အ​ထိ ​ဘာ​တွေ ​လုပ်​နိုင်​သ​လဲ ၊ ​လုပ်​ပေး​ခဲ့​ပြီး​ပြီ​လား​ပေါ့၊
​ဟို​တစ်​နေ့​က​လဲ ​အဲ့​လို​ပဲ ​သာ​မ​ည​တောင်​ဆ​ရာ​တော်​၏ ​အိပ်​မက်​စာ​လွှာ​တဲ့ . ​ဘာ​တဲ့ ​ဆက်​လက်​ဖြန့်​ဝေ​ရင် ​အ​ကျိုး​ပေး​မယ် ၊ ​မ​ယုံ​ကြည်​ပဲ ​မ​ဖြန့်​ဝေ​ရင် ​ဒု​က္ခ​ရောက်​မယ် ​သေ​မယ်​တဲ့ . ??? ​အ​ဓိ​ပ္နါယ်​ကို​မ​ရှိ​တာ . ​အဲ့​ဒီ့​စာ​တစ်​စောင့်​သံ​သ​ရာ​ကြောင့် ၅ ​ရက်​ဆက်​တိုက်​လောက် ​လိုက်​ဖျက်​နေ​ရ​သေး​တယ် . ​သေ​မှာ​ကြောက်​တဲ့​သူ​တွေ ​ဆက်​လက်​ဖြန့်​ဝေ​တာ​နေ​မှာ​ပေါ့ . ​ဦး​နှောက်​မ​ရှိ​ကြ​တာ​များ​ပြော​ပါ​တယ် . ​အဲ့​လို​မျိုး​စာ​ကို ​မ​ဝေ​လို့ ​သေ​သွား​မယ်​ဆို​ရင် ​ဆယ်​ခါ​ပြန် ​အ​သေ​ခံ​လိုက်​မယ် . ​တစ်​ကယ်​ပြော​တာ . ​သံ​ဃာ​တော်​တွေ ​ရ​ဟန်း​တွေ​ဟာ ​ဘယ်​တော့​မှ ​လူ​တွေ​ကို ​ကျိန်​စာ​တိုက်​ပြီး​တော့ . ​အဲ့​လို ​မ​ဝေ​ခိုင်း​ဘူး . ​သေ​မှာ​တို့ ​ဒု​က္ခ​ရောက်​မှာ​တို့​က ​ကျိန်​ဆဲ​တာ​ပဲ​လေ . ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဘု​ရား​ရှင် ​သက်​ရှိ​ထင်​ရှား​ရှိ​စဉ်​ကာ​လ​တုန်း​က ​လူ​ဝတ်​ကြောင်​တွေ​ကို ​ကျိန်​ဆဲ​တာ​တို့ ​ကျမ်း​ကျိန်​ခိုင်း​တာ​တို့ ​ရှိ​ခဲ့​သ​လား . ​ကျွန်​တော်​တော့​ဖြင့် ​ဘယ်​ကျမ်း​ထဲ​မှာ​မှ ​မ​တွေ့​ဘူး​ပါ​ဘူး​ဗျာ . ​အဲ့​ဒါ​တွေ​ကို ​ယုံ​တဲ့​သူ​က ​ရှိ​သေး​တယ် . ​ဥ​ပ္နါဒ်​ဒဏ်​ကြောင့် ​ဥ​ပ္နါဒ်​ဖြစ်​တယ်​တဲ့ . ​အဲ့​ဒါ​က ​ဥ​ပ​မာ​တစ်​ခု​ပဲ​ရှိ​သေး​တယ် . ​ကျန်​တာ​ပို့​တဲ့​သူ​တွေ​က​လဲ ​ရှိ​သေး​တယ် . ​အိမ်​က​ကြောင်​လေး ​သေး​မ​ပေါက်​တာ​က​အ​စ forward mail ​ပို့​တယ်​ဆို​တော့ ​စဉ်း​စား​သာ​ကြည့်​တော့ . ​လက်​ယား​ပြီး ​လက်​စွမ်း​ပြ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​လဲ ​သူ​များ​တွေ​လို ​ကိုယ်​ပိုင်​ဘ​လောက်​ရေး​ပေါ့ . ​ကြောင်​သေး ​မ​ပေါက်​တာ​တင်​မ​ဟုတ်​ဘူး . ​ဆွေ​ခု​နှစ်​ဆက် ​မျိုး​ခု​နှစ်​ဆက်​အ​ကြောင်း​က ​အ​စ ​ရေး​လို့​ရ​တယ် . ​တစ်​နေ့​တစ်​နေ့ ​ဒါ​တွေ​ကို​ပဲ ​လိုက်​ဖျက်​နေ​ရ​တာ ​ကျွန်​တော့်​မှာ ​အ​လုပ်​ကို ​လုပ်​ရ​တယ် ​မ​ရှိ​ဘူး . ​မေး​တဲ့​မေး​ခွန်း​တွေ​ကို ​အဲ့​ဒီ့ ​အ​စောင် 200 ​လောက်​ထဲ​က ​မ​နဲ ​ပြူး​ပြဲ​ပြီး​ရှာ​ရ​တယ် . ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ​လဲ ​မှား​ဖျက်​မိ​တဲ့​အ​ခါ​တွေ​လဲ ​မ​တတ်​နိုင်​ဘူး​ပေါ့ .
(၁) Google Account ​ကို​ဝင်​ပြီး settings ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၂) Setting ​ထဲ​က Accounts and Import ​ကို​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၃) ​အောက်​ဆုံး​က ​စာ​လုံး​အ​ပြာ​ရောင်​နဲ့​ရေး​ထား​တဲ့ Google Account settings ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၄) My products ​န​ဘေး​က Edit ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ ။ (​ဓါတ်​ပုံ​အောက်​တည့်​တည့်​တွင်​ရှိ)
(၅) DeleteaProduct ​အောက်​က Remove Gmail permanently ​ဆို​တာ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
​ကဲ ​အ​ခု ​ယ​ခင် gmail ​အ​ကောင့် ​ပျက်​သွား​ပါ​ပြီ . ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ​ဦး .
​နေ့​အိပ်​မက် September 29, 2009 at 11:42 AM
​စိတ်​လျှော့... ​စိတ်​လျှော့.. ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ.... ​သူ​များ​တွေ​ဘယ်​လို​ပြော​ပြော ​ကိုယ့်​အ​လုပ်​ကိုယ်​အ​ကောင်း​ဆုံး​လုပ်​နိုင်​ရင် ​ပြီး​တာ​ပဲ.... ​အဲ​လို​စ​ကား​တွေ​က ​လျစ်​လျူ​ရှု​ထား​လိုက်​တာ​ပဲ ​ကောင်း​ပါ​တယ်
AKU HARAP November 14, 2009 at 2:21 AM
​ကြိုက်​သွား​ပြီ ..... ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရာ .. ​ပ​ထ​မ​ဆုံး​ပါ ​ဒီ​ကို ​ကျွန်​တော်​ရောက်​တာ ၊ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တော်​တော်​လေး​ကို ​စုံ​ပါ​တယ် ​စိတ်​တိုင်း​လည်း ​ကျ​တယ် ၊ ​နောက်​လည်း ​လာ​အား​ပေး​မယ်​နော် ​အစ်​ကို .... ​လေး​စား​လျှက်
kse zaw May 15, 2010 at 11:37 AM
Green January 26, 2011 at 2:52 PM
​အစ်​ကို​ရဲ့ post ​တွေ​က ​ကျွန်​တော့် ​အ​တွက် ​အ​ရမ်း useful ​ဖြစ်​တယ်​ဗျာ။.. ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်...​ဒါ​နဲ့.. facebook account ​ကို ​ရော ​ပိတ်​လို့ ​ရ​လား ​ခင်​ဗျာ...​ကျွန်​တော့်​မှာ account2​ခု ​ဖွင့် ​မိ​သွား​လို့ ​ပါ​ဗျာ...
Torrent file ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို Download ​လုပ်​မ​လဲ...
Nokia phone ​တွေ​အ​တွက် ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ်​လို​အပ်​တဲ့ ...
Virus ​ကြောင့် ​ပျောက်​နေ​တဲ့ Tools ​တွေ​ကို ​ဘယ်​...
Zaw gyi ​ကို vista ​မှာ ​တင်​တာ ​အ​ဆင်​ပြေ​စေ​ဖို့...
Flash Drive ​ကို ​ဘယ်​လို ​နာ​မည်​မျိုး​ပေး​သင့်​သ...
.js ​နဲ့ eot ​ကို ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ ​စိတ်​ချ​လက်​ချ ​...